Maxaa ka jira inuu dib u dhac ku yimid shirkii uu Farmaajo ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa ka jira inuu dib u dhac ku yimid shirkii uu Farmaajo...
Maxaa ka jira inuu dib u dhac ku yimid shirkii uu Farmaajo ugu yeeray madaxda maamul goboleedyada?
Muqdisho (Halqaran.com) – Shirkii uu madaxweynaha JF Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ugu yeeray inay isugu yimaadaan madaxda DF Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira ayaa dib u dhacay ku yimid.
Shirka oo la qorsheeyay inuu socon doono inta u dhaxaysa 5-8 Luulyo, 2020 ayaa ajandihiisu ahaa sidii wadatashiyo ballaaran looga yeelan lahaa doorashooyinka dalka, arrimaha amniga, dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab, dhammeystirka dib u eegista dastuurka iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
Waxaa horay shirkaan u qaadacay Madaxweynayaasha Puntland & Jubbaland oo ku gacan seyray ka qayb galka Shirkaasi, waxaana ay si toos ah uga sheegeen Warbaahinta.
Shirkaan maanta baaqday ayaa waxaa ka horeeyay shir dhanka Internetka ay ku wada qaateen Madaxweyne Farmaajo & Madaxweynayaasha Maamul Goboledyada dalka ka jira, kaasi oo qudhiisa natiijo fiican ka soo bixin.
Waxaa weli magaalada Muqdisho soo gaarin Madaxweynayaasha Maamul Goboledyada, xitaa kuwa taageersan dowladda Soomaaliya, kuwaasi oo kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle.
Sida muuqata dowladda Madaxweyne Farmaajo waxaa hareeyay siyaasad xumo ku saleysan la dhaqan la‘aanta maamul Goboledyada oo muhiim ay ahaan laheyd wadatashigooda.
Si kastaba, Soomaaliya ayaa la filayaa inay ka dhacdo doorasho, waxaase ka horeeya hanaanka wadatashiga ee la wada ogol yahay, taasi oo sida muuqata dowladda aysan haynin wadadeeda.